I-Acer iba liqabane lenkqubo ye-FIRS TLEGO League | Iindaba zeGajethi
AMANTOMBAZANA WOKUQALA liphulo elifuna ukunika amantombazana aphakathi kweminyaka eyi-10 ne-16 abanomdla kwimimandla eyahlukeneyo enjengesayensi, imathematics, ubunjineli okanye itekhnoloji. Enkosi kule mfundo baya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kwi-LEGO League YOKUQALA. I-Acer yazisa ukuba iba liqabane kweli phulo, ibonelela ngezifundo kumaqela amantombazana ukuze athathe inxaxheba.
I-Acer ifikelele kwisivumelwano kunye neScientia Foundation kule minyaka mithathu izayo yokuba liqabane kule GIRLS YOKUQALA inyathelo. Ke umenzi owaziwayo uya kubonelela ngezifundo kumaqela awenziwe ngamantombazana aza kuthatha inxaxheba kwinkqubo ye-LEGO League YOKUQALA. Ezi zifundo zifuna ukukhuthaza italente yabasetyhini kwiindawo ze-STEM.
Le nkqubo inenkqubela phambili ebalulekileyo kwimarike kwaye iyanda kubukho beendaba. I-Acer inethemba lokuba ukusebenzisana kuya kunceda ukuze inani elikhulu lamantombazana libe nokufikelela kuyo kwaye ngale ndlela ikwazi ukuphucula iitalente zazo kwezi nkalo zesayensi okanye ubuchwepheshe.
Enkosi kwizifundi, bayakhangela khuthaza ubizo lwe-STEM phakathi kwamantombazana aneminyaka eli-10-16. Ukukhuthaza italente yabasetyhini kubizo lwenzululwazi kunye netekhnoloji, ukubanika ukubonakala kunye nokukhuthaza ukuzithemba kubuchule babo. Ukongeza ekuncedeni ukuba kwixa elizayo baninzi abantu basetyhini kwezi nkalo, into esele ihleli incinci ngoku.
Iphulo le-GIRLS LOKUQALA lifuna ukukhuthaza iimeko zokufunda ze-STEM rhoqo. UKUYAUkongeza ekomelezeni ukuzithemba nokuzithemba phakathi kwabafundi, Hlakulela uluntu oluxhasayo phakathi kwabalinganayo, ukukhulisa umdla wabafundi ababhinqileyo kwimisebenzi ye-STEM, kunye nokubandakanya imeko yabo engqongileyo. Into Acer efuna ukuyixhasa.
Kuba esinye seziphumo kukuba gxila kwitalente yabasetyhini, ukongeza ekuziseni abantu abatsha kufutshane nale ndawo yomsebenzi kunye nokufunda ngakumbi ngendlela ezisebenza ngayo iinkampani ezininzi kwicandelo. Okanye kwixa elizayo unethuba lokusebenza kwiinkampani ezinje ngeAcer, ezinye zezona zibaluleke kakhulu kule nkalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Acer iba liqabane lenkqubo ye-LEGO League YOKUQALA eSpain
Izithethi ze-IKEA SYMFONISK ziqalisiwe eSpain